Muuse Biixi oo loo doortay madaxweynaha Somaliland - BBC News Somali
Muse Biixi Cabdi ayaa loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland.
Xisbiga Kulmiye ee uu murashaxa u yahay Muuse Biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 55.19%.
Muse Biixi Cabdi ayaa ahaa guddoomiyaha xisbiga talada haya.
Xisbiga Waddani ee uu murashaxa u ahaa Cabdiraxmaan Cirro ayaa doorashadii usbuuc ka hor ka dhacday Somaliland waxa uu helay 40.73% halka xisbiga UCID uu helay 4.17%.
Murashaxii madaxweynaha ee xisbiga mucaaridka ah ee Waddani ee Cabdiraxman Maxamed Cabdillahi Cirro wuxuu caawa shir jaraa'id oo uu ku qabtay Hargeysa kaga dhawaaqay inuu aqbalay natiijada doorashada isagoo ka xun .
Musharraxa xisbiga Waddani, Cabdiraxmaan Cirro, ayaa muuqaal uu soo dhigay baraha bulshada ka hor inta aan lagu dhawaaqin natiijada waxa uu shaki ka muujiyay xalaalnimada doorashadaasi, waxa uuna intaasi ku daray in doorashadaasi aysan xor iyo xalaal ahayn.
Cadbiqadir Iimaan Warsame, guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa shaaciyay natiijada doorashada ee ay guushu ku raacday Muuse Biixi.
Natiijada doorashada ayaa qaadatay muddo toddobo maalmood ah waxaana soo baxayay qaar ka mid ah musharrixiinta oo dhaliilaya qaabka ay doorashada u dhacday. Haseyeeshee guddiga doorashada waxa uu beeniyay in ku shubasho ay jirtay.
Musharrixii xisbiga UCID Feysal cali Waraabe, ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee la doortay.
Muse Biixi Cabdi, madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanideeda ee Somaliland ayaa ku dhashay miyiga Hargeysa sandkii 1948.
Waxa uu sheegay in uu waxbarashadiisii Quraanka, dugsiga hoose iyo dhexeba uu ku qaatay magaalada Hargeysa. Dugsiga sare ee Cammuud ee Borama ayuu ka qalin jebiyay sandkii 1970-kii, Ka dibna wuxuu ku biiray ciidamada cirka ee Soomaaliya.
Muuse Biixi Cabdi ayaa bishii May sanadkii 1985 waxa uu ku biiray jabhaddii SNM ee dagaalka kula jirtay dawladdii Maxamed siyaad Barre, waxaana markii dawladdii dhexe ee Somaliya burburtay ee Somaliland na ay ku dhawaaqday goonni isu taagga, wuxuu noqday 1993dii wasiirkii Arrimaha gudaha Somaliland ee dawladdii Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Wuxuuna wasaaraddaasi hayay muddo oo uu ku soo can baxay.
Muse Biixi wuxuu ka mid noqday gudigii fulinta, markii la aasaasay Xisbiga Kulmiye bishii may 2002-dii, isagoo gudoomiye kuixigeenka kowaad loo doortay 2008, waxaa gudoomiyaha xisbiga talada haya ee Kulmiye loo doortay 10 nofembar 2015-kii, ka dib shirweynihii xisbiga, waxaana loo xushay in uu noqdo musharraxa xisbiga.
Wuxuu ku hadlaa luqdaha English, Carabi, iyo Ruush. Wuxuu Jaamacadda Hargeysa ka dhammeeyay shahaadada sare ee cilmiga xallinta khilaafaadka, 2008 ilaa 2010.